अब के गर्लान प्रधानमन्त्री ओलीले ? - नेपालबहस
अब के गर्लान प्रधानमन्त्री ओलीले ?
| १८:३१:१५ मा प्रकाशित
♦ स्मृति अर्याल
सत्ताधारी दल नेकपामा देखिएको विवादले जाडो शुरु नहुँदै गर्मीको अनुभुति गराएको छ । मौखिकरुपमा हुने आरोप प्रत्यारोप लिखित भएपछि अब के हुन्छ ? भन्ने चासो सबैतिर छ । सवाल जवाफ लिखित मात्र होइन अरु चार सचिवालय सदस्यको सहमतिमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको एकल प्रतिवेदनले पार्टी विभाजनको डिलमा पु¥याएको छ । सो प्रतिवेदनमा उठाइएका सवालहरुलाई जवाफ दिन सक्ने ठाउँमा स्वयं केपी ओली नभएपछि त्यसलाई जसरी पनि फिर्ता गराउने अभियानमा दोस्रो तहका नेताहरु क्रियाशिल छन् ।
सो प्रतिवेदनमा उठाएका सवालहरु अलिकति पनि काल्पनिक वा गलत भएको भए यतिबेलासम्म ओली र उनका वरपरकाहरुले आगो ओकली सक्थे । ‘कुरा त सही हो तर प्रचण्डले भन्दा माधव नेपालले सो कुरा उठाएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने लाइनमा नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्ता पुगिसके ।
यो प्रतिवेदन फिर्ता नभई छलफलमा गयो भने यसले कि ओलीलाई फेरी एकपटक ‘हिरो’ को रुपमा काम गर्ने अवसर मिल्छ या त बहिगर्मन हुन्छ । अहिलेको जस्तो स्थिति रहन्न् । यही कुरा बुझेर केही नेताहरु सो प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने अभियानमा लागेका छन्, जसको नेतृत्व शंकर पोखरेलले गरिरहेका छन् ।
ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध
यी दुईको सम्बन्ध कस्तो हो भन्ने ओलीका विश्वासपात्र पुर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एक ट्वीटमार्फत बुझने भाषामा लेखेका छन् । त्यो हो, ‘लेनदेनको सम्बन्ध ।’ ‘सिद्धान्त र संगठनात्मक प्रणालीसहितको संकट उत्पन्न भएको भए पो संकट मान्नु लेनदेनको व्यापारिक स्वार्थमा अडेको एकता अर्को सम्झौतापछि समाधान भैहाल्छ नि । वेकारको हल्ला ।’
२०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा उप तथा परराष्टमन्त्री बनाएकाेमा भारतीय खुफिया एजेन्सी “रअ” को दवाव थियो । सो कुरा अहिले माधव नेपालले आफना अति निकटहरुलाई भन्ने गरेका छन् । राजनीतिबाट लगभग सकिन लागेका ओली गिरिजा सरकारमा गएपश्चात पुनः अगाडी आए । हुनतः शान्ति सम्झौता हुदाँ उनी दशौं नम्बरमा पनि गणनामा पर्दैनथे ।
कार्तिक १६ गते उनले गरेको यो ट्वीटलाई धेरैले शेयर गरे र एक प्रकारको छलफल शुरु भयो । बाँस्कोटाले प्रचण्डलाई मात्र आरोप लगाएनन्, केपी ओली पनि व्यापारी हुन भनी प्रष्ट पारे । जुन कुरा प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पनि स्वीकार गरिएको छ । ‘यतिकाण्ड’ आएकै बालुवाटार र खुमलटारको लेनदेन नमिलेर नै हो ।
तत्कालिन नेकपा एमालेमा अराजक, गुटबन्दी र विद्रोही समूहलाई चलाएर आएका केपी ओलीको प्रचण्डसँग कहिल्यै पनि राजनीतिक सम्बन्ध थिएन । प्रचण्डसँग वार्ता गर्न बामदेव गौतम रोल्पातिर जाँदा ओलीले एमालेभित्रका माओवादी भन्थे । माधव नेपाल वनारसमा वार्ता गर्न जादाँ पार्टी माओवादीकरण हुनलाग्यो भन्दै विरोध गर्ने उनै ओली थिए । ‘गुरिल्लासँग कुम मिलाउने अर्को गुरिल्लाले मात्र मिलाउन सक्छ ?’ भन्दै जनआन्दोलनपछि पनि उनले माओवादी र खासगरी प्रचण्डलाई खेद्ने गर्थे ।
माधव नेपाल महासचिव हुदाँ जुनसुकै निर्णय र कार्यक्रममा विद्रोही हुने, गुट चलाउने गरी हैरान पारेका ओलीलाई साइजमा ल्याउने अवसर पनि थियो, तर माधव नेपालले ओलीको राजनीति जोगाई दिनुपर्छ भनेर मात्र होइन कि २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा उप तथा परराष्टमन्त्री बनाएकाेमा भारतीय खुफिया एजेन्सी “रअ” को दवाव थियो । सो कुरा अहिले माधव नेपालले आफना अति निकटहरुलाई भन्ने गरेका छन् । राजनीतिबाट लगभग सकिन लागेका ओली गिरिजा सरकारमा गएपश्चात पुनः अगाडी आए । हुनतः शान्ति सम्झौता हुदाँ उनी दशौं नम्बरमा पनि गणनामा पर्दैनथे ।
माओवादीलाई गुरिल्ला भन्दै पेल्दै जाने ओलीको प्रभावका कारण सके देशभर नभए उपत्यकासम्म पनि चुनावी तालमेल गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको सहमति बीचैमा भाडियो । त्यसपश्चात माओवादीले झण्डै बहुमत ल्याएर २०६४ को चुनाव जित्यो । त्यो चुनावमा आफु पराजित भएपछि ओलीको एकमात्र मिसन बन्यो, माओवादीलाई जसरी पनि खेद्ने । माधव नेपालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि महासचिव बने झलनाथ खनाल । झलनाथ खनाललाई रोक्न ओलीले अनेक प्रयास गरे । तर नसकेपछि ‘माओवादीकरण भएको एमालेको एक साथ सदस्य ।’ भन्दै उडाउन थाले ।
२०६५ सालमा बुटवलमा भएको तत्कालिन एमालेको चुनावमा झलनाथ खनाल सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिने वातावरण बन्यो । ठुलो दल माओवादीसँग मिलेर सरकारमा गएको, संविधान निमार्ण गर्ने क्रमको नेतृत्व लिएको कारण झलनाथको पल्ला भारी थियो । उनी सर्वसम्वत हुने वातावरण भाँड्न ओलीले कथित मानवअधिकारवादी नेता सुवोध प्याकुरेललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाए, र आफुले पनि उम्मेदवारी दिए ।
माधव नेपालको सरकारको विरोधमा माओवादीको आन्दोलनलाई तुहाउन मात्र होइन, युवा संघमार्फत महेश बस्नेतहरु जस्ता पात्र उनले सिर्जना गरे । पछि प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका धादिङका ‘चरी’ पनि ओलीका उत्पादन हुन । जसलाई उनै ओलीले आफैले पुष्टि गरेका थिए, चरीलाई अस्पतालमा भेटन् गएर ।
खनाल अध्यक्ष चुनिए । मतदान सकिदाँसम्म नेता कार्यकतासँग ठट्यौली गरिबसेका ओली मतपरिणाम पछि एकाएक धाँधलीको आरोप लगाउँदै हिडेँ । एमालेको वैठकमा नै जान छोडे । झलनाथ र माधव नेपालले निकै मेहनत गरेपछि तेस्रो बरियतामा सहमति जनाउँदै बल्खु जान थाले । झलनाथ र माधव नेपाल ओलीसँग त्यसरी बेला बेलामा डराउने दुइटा महत्वपुर्ण कारण थिए, पहिलो उनले देशभरका कार्यकर्तालाई मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा संगठित गरेका थिए । दोस्रो भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का खास सहयाेगी थिए ।
लगत्तै कटवाल प्रकारण आयो । नेकपा एमालले पार्टीको बैठकबाट निर्णय नै गरी कटवाल हटाउन प्रचण्डलाई सहमति दिएको थियो । सो बैठकमा ओली पनि थिए । माइन्युट लेख्ने बेला ओलीले एक कर्मचारी हटाउने कुरा दस्तावेज गर्न हुन्न भनेपछि लेखिएन भनेर पछि ईश्वर पोखरेलले निकटहरुसँग भनेका थिए । रअको प्रभाव र दवावको कारण ओलीले कटवाल नहटाउने रणनीति लिए । यसका पछाडी दुई कारण थिए ।
पहिलो, कटवाल प्रकरणपछि माओवादीलाई दवाव सिर्जना गरी साइजमा ल्याउने, अर्को भारतसँगको सम्बन्ध थप मजवुत बनाउने । कटवाल प्रकरणपछि प्रचण्ड सरकारबाट बहिगर्मन भए । ‘माओवादी नामको एक बेलुन थियो जसलाई कटवाल नामको छेस्कोले प्याट फुटायो ।’ यो त्यतिबेला ओलीको चलेको टुक्का थियो । उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, प्रचण्डलाई रोल्पामा गएर मुङह्रो चिथोरेको समेत भन्न भ्याए ।
माधव नेपालको सरकार ढलेर माओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच सात बुँदे सम्झौता पश्चात सो सरकार गठन भएको थियो । जसलाई ओलीले ठाडो चुनौती दिए । मन्त्री बनाउने, राजनीतिक नियुत्तिलगायतमा पार्टीमा छलफल भएन प्रधानमन्त्रीको एकल अधिकार होइन, पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो भन्दै भाषण मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखे । सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरे र सरकार ढल्यो ।
माओवादी र प्रचण्डलाई खेद्ने क्रममा उनले आफनै पार्टीभित्र झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम लगायतलाई गुरिल्लाका मतियार मात्र भनेनन् र पार्टीलाई माओवादीकरण गरेको भन्दै देश दौडाहा गरे । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा झापाबाट निर्वाचन जितेपछि झन् उनको मनोवल उच्च भयो र माओवादीलाई प्रहार गर्ने क्रम बढी रह्यो ।
बामदेव गौतमले साथ दिएपछि संसदीय दलको नेता समेत चुनिए । २०७१ सालमा भएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा वामदेव गौतमसँगको सहमतीले मात्र होइन, झलनाथ खनालको मौन समर्थनमा अध्यक्ष चुनिए । केपी ओलीसँग बदला लिन प्रचण्डले मात्र होइन ओलीको स्वभाव बुझेका शुशील कोइराले समेत माधव नेपाल अध्यक्ष भइदिए हुने भन्ने शुभेच्छा राखे, तर चुनाव ओलीले जिते ।
यता माओवादीले पनि ओलीलाई भारतपरस्त, दलाल, जनआन्दोलनका भिलेनको रुपमा प्रचार गरिरहेकै थियो । कम्युनिष्टका नामका कलङ्क भनेर प्रचण्डले भाषणनै गरेका थिए । राजावादी मात्र होइन विचौलिया र गुण्डाका नाइकेका रुपमा ओलीलाई माओवादीले देशभर प्रचार गरिरहेकै थियो ।
हिजो एकअर्काका कटु आलोचक अब एकै मोर्चामा दिनहुँ भेटिने भए । त्यो हो, तीन दलका प्रमुखहरुको छलफल । भुकम्पले दिएको धक्कापछि संविधान बन्ने क्रम शुरु भयो र संविधान जारी भयो । तीनदलको सहमतिलाई अक्षरस: पालना गर्दै प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए । लगत्तै लागेको नाकाबन्दीलाई ओलीले अवसरको रुपमा लिए ।
जसको कारण ओलीको उचाइ बढ्दै गयो । सहमति अनुसार प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पन ओली तयार भएनन् । र कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले ओली विरुद्द अविश्वासकाे प्रस्ताव ल्यायो । आफनो अन्तिम मन्तव्यमा ओलीले सदनमा भाषण गर्दा भनेका थिए, ‘आज यो माग आउँछ पुरा गर्छु, भोली अर्को आउछँ, त्यो पनि टालटुल पारेर पठाउँछु, फेरी अर्को आउँछ, हैन कति माग हुन कसरी पुरा गर्ने ?’ अर्थात आफनो र प्रचण्डको सम्बन्ध लेनदेनको थियो, लिदाँ र दिदाँ हैरान भइयो भन्ने सार सो मन्तव्यमा थियो । र त्यो सम्बन्ध अहिले पनि त्यही हो । जुन कुरा अहिले बाँस्कोटाको टुइटले पुष्टि गरेको छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा सोचेजस्तो मत नआएपछि ओली प्रचण्डसँग मिल्ने रणनीतिमा पुगे । कांग्रेस र माओवादी मिले भने आफु कमजोर हुने आंकलन गरि लेनदेनका आधारमा चुनावी तालमेल भयो र लेनदेनबाट नै पार्टी एकिकरण हुने भयो । प्रचण्डले आफनो निरन्तर ओरालो लागेको राजनीतिक यात्रालाई पुनः फर्काउन हिजो आफु पहिलो शक्ति हुदाँ १० नंम्वरमा पनि गणना नहुने व्यत्तिसँग साझेदारी गर्नु प¥यो । यो नै प्रचण्डको ठुलो भुल थियो ।
माओवादीको काँग्रेससँग चुनावी तालमेल रोक्न सके मात्र चुनाव जितिने ओलीको रणनीतिलाई प्रचण्डले बुझन सकेनन् र आज यो भुमरीमा परिरहेका छन् ।
अब ओलीसँग रहेको एक मात्र हतियार अजय सुमार्गीको रोकिएको तीन अरब पुकुवा गर्ने, लडाकु शिविरको मुद्दा अख्तियारमा तामेलीमा हाल्ने र केही व्यापारिक घरानासँगको उठबसबाट आएको पैसामा प्रचण्डको हिस्सा दिने । यी कुरामा प्रचण्ड मान्न तयार हुने र अन्तिम अस्त्र त्यही हुने उनले आफना निकटकालाई बताएपछि बाँस्कोटाले त्यो टुइट गरेका हुन् ।
समान्यतः कम्युनिष्ट पार्टीमा फरक मत माथि छलफल हुन्छ र त्यस्तो फरक मत कमिटीगत बैठकमा सो कमिटीको सदस्यले राख्न पाउँछ । त्यही अनुरुप सचिवलाय बैठकमा यसअघि माधव नेपालले फरक मत राखेका थिए । फरक मत त्यतिबेला आउँछ जतिबेला अध्यक्ष वा महासचिवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चित्त बुझदैन् । तर अहिलेको अवस्था फरक हो । कार्यकारी अध्यक्षले अर्का अध्यक्षको व्यवहार, शैली र कार्यगत कमजोरीको कारण सिंगो व्यवस्थामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
सञ्चारमाध्यममार्फत त्यो पार्टी कार्यकर्तामा मात्र होइन जनतामा पुगिसक्यो । जनजीविकाका सवाललाई सरल भाषामा सो प्रतिवेदनमा समेटिएको कारण ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । छलफलमा गए सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै त्यो केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छ, जुन ओलीका लागि फलामको चिउरा हो । छलफलमा नलगौं यो प्रतिवेदन प्रचण्ड एक्लैको होइन । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतमले आफनो सहमति रहेको बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीसँग दुई विकल्प छन् पहिलो हो, आत्मालोचनासहित पार्टीको निर्णय अनुसार चल्ने । दोस्रो हो अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउने ।
माफी भन्ने ओलीको शब्दकोषमा छैन । जुन विगतदेखि देखिदै आएको छ । उनी निकटमा दोस्रो तहका नेताहरुको दवावमा उनले माफी मागे, आत्मालोचित भए र पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडी बढे भनेपनि त्यो दीर्घकालसम्म जान्न । किनकी ओली इख र कुण्ठाका पर्याय हुन । आज आफुलाई परेको दवाव उनले अलिकति माथि पर्नसाथ बदला लिइ हाल्छन् ।
जसको परिणाम यही घनचक्करमा नेकपा फेरी आइपुग्छ । त्यो ओलीले मात्र होइन, प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपालले प्रष्ट बुझेका छन् । जसको कारण प्रचण्डहरुले स्थायी समाधान खोजेका छन् त्यो ओलीका लागि प्रत्युउत्पादक हो । सके बामदेव पकाउने नसके प्रचण्डलाई गलाउने ओली रणनीति यो पटक कमजोर सावित भयो ।
तर अब बल प्रचण्डको हातमा मात्र छैन् । एमालेका हस्तीहरुको साथ उनले पाएको कारण बाँस्कोटाले भनेझै व्यापारिक लेनदेनमा मात्र टुङिने अवस्था छैन् । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तल्लोस्तरको गाली गर्नेहरुलाई खोजी खोजी राजनीतिक नियुत्ति दिएको पार्टीमा जीवन अर्पण गरेकाहरुले कसरी टुलुटुलु हेर्न सक्छन् ?
हिजो ओलीलाई साथ दिएकाहरु पनि विस्तारै गलत हो तर बोल्ने अवस्था छैन, प्रचण्ड र माधवको जोडी कतिवेर टिक्छ त्यही अनुसार योजना बनाउँला भनि मौन छन् । अघिल्ला विवादहरुमा बोलेका नेता कार्यकर्ता यसपटक रक्षात्मक अवस्थामा रहनुको कारण पनि यही हो । उठेका प्रशनहरुको जवाफ दिने अवस्थामा ओली छैनन् । सो कुरा उनले भनिपनि सकेका छन् । आरोप मिथ्या भएर हैन दिने जवाफ नभएर हो । सडक, चोक चोकमा ओलीको कमजोरी बनेको छ जवाफ नदिने कुरा र यसले उनलाई नै क्षति पु¥याउछ ।
ओलीको ठुलो स्टेप
विगत केही दिनदेखि म ठुलो स्टेप लिन्छु भनी धम्काएको विषयमा केही गम्भिर्यता छ । विगतमा यस्ता विवाद हुदाँ यसरी नबोलेका उनी किन यसपटक बोले त ? यो सवालको जवाफ पाउन एभरेष्ट होटलमा रअका प्रमुखसँग ओलीको विगतको शिष्टाचार भेटमा जानुपर्छ । जुन भेटका बारेमा पत्रकार सुधिर शर्माले प्रयोगशालामा प्रष्ट पारेका छन् ।
विगतको त्यही सम्बन्ध ओलीको अहिले रअसँग बनिसकेको छ । त्यही सम्बन्धका कारण उनमा यो उर्जा आएको हो । नत्र यस्तो महामारीका बीचमा रअका प्रमुख नेपाल आउनु पर्ने कारण के थियो ? त्यी भेटबाट हौसिएका उनले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी पार्टी फुटाउने बाटो खोल्नेछन् । र प्रचण्डहरुलाई पार्टी फुटाएर जाऔं भन्छन् । तर माधव नेपाल र प्रचण्ड पार्टी फुटाउने तहसम्म जान तयार छैनन् ।
यो बेला ओली आफै पार्टी फुटाई नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता बनी कांग्रेसको समर्थनमा सरकार चलाउने योजनामा छन् । पछिल्लो समय भारतले डा. बाबुराम भट्टराईमार्फत मधेशी दल र प्रचण्डलाई भित्र भित्रै नजिक बनाइरहको र कांग्रेसका केही नेताको साथ रहेको कुरा ओलीले नजरअन्दाज गरेका छन् । ओलीले पार्टी फुटाएको खण्डमा सके प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभए बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ र पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल हुनेछन् ।
यो कुरा ओली निकटका दोस्रो तहका नेताले प्रष्ट बुझेका छन । जसको कारण पार्टी पनि नफुटाउने, प्रचण्डलाई गलाउने रणनीतिमा जान ओलीलाई सल्लाह दिएका छन् । पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भने अहिले नजिक भएका पुर्व माओवादीले मात्र होइन, मन्त्रिपरिषदमा रहेकाहरुले समेत ओलीको साथ छोड्ने छन् । त्यसैले केही महिना नेकपा यस्तै गोलचक्करमा रुमल्लिरहनेछ ।
प्याराग्लाइङि दुर्घटनाले आकाशमा उड्न चाहानेहरुलाई त्रसित १९ मिनेट पहिले
डीआईजी पोखरेललाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस ४५ मिनेट पहिले
क्षतिमात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा कोरोनाले पाठ सिकायाे १३ घण्टा पहिले
डिपोबाट ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध चामल बिक्नै छाड्यो ३ दिन पहिले
अपराध नियन्त्रणमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन १ दिन पहिले
पर्यटनको अर्को गन्तव्य ‘बेथानचोक नारायणस्थान डाँडा’ १ हप्ता पहिले
रोल्पामा दुई जनाको शव फेला १ दिन पहिले
किन राखियो नेपालको अन्नपूर्ण सर्किटलाई घुम्नैपर्ने १० गन्तव्य सूचीमा ? ३ हप्ता पहिले
वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधानको टोलीलाई जनकपुरमा विशेष स्वागत, १ र २ प्रदेशबाट जिताउने प्रतिबद्धता ३ हप्ता पहिले
भागबण्डामा देश लुट्ने नेकपाकाे झगडा ४ हप्ता पहिले
गाजाको युद्ध रोक्न इजिप्ट र संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा कडा मेहनत १ वर्ष पहिले
समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलन नदिने महानगरपालिकाको तयारी ४ महिना पहिले
मृत मृग फेला ९ महिना पहिले
मृत्यु भएका ३२० जनामध्ये कम्तीमा ४५ जना बालबालिका : राष्ट्रसङ्घ २ वर्ष पहिले